स्रष्टालाई घाँटी थिच्ने काम भयो-गायक विरही कार्की – NQKhabar
स्रष्टालाई घाँटी थिच्ने काम भयो-गायक विरही कार्की
प्रकाशित मिति: ४ बैशाख २०७४, सोमबार ०४:२८
एउटा गायक भनेको समाजको प्रतिनिधि पात्र हो । गायकले समाजसेवा गर्नु भनेको ठूलो कुरा होइन । समाजको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो समाजमा आइपरेका कुरालाई समाधान गर्नुपर्छ, समाज विकासको काममा लाग्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि गायक गायिकाले जस्तो काम ग¥यो त्यसको सिको गर्नेहरु धेरै हुन्छन् । मेरी आमाको नामबाट मैले फूलमाया कार्की फाउन्डेसन संचालन गरेर केही न केही भए पनि समाजमा सहयोग गर्न खोजेको हुँ । पहिला एकल साँझ गरे, जसबाट आएको रकम चेपाङ बालबालिका शिक्षादिक्षाको लागि खर्च गरेँ । त्यस्तै गोर्खा जिल्लामा गएर मृगौला पीडितका सहयोगको पाइला चालेँ । क्यान्सर पीडित, मृगौला पीडित, आर्थिक अभावमा उपचार नपाएका कलाकार एवं कुनै पनि जनताका लागि मैले फूलमाया कार्की फाउन्डेसनबाट सहयोग गर्दै आएको छु । यस फाउन्डेसनमा आजीवन सदस्यहरु बन्ने र सहयोग गर्नेहरुबाट म पुलको माध्यम भएर समाजसेवामा सक्रिय रहेको छु । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् यीभन्दा धेरै सामाजिक काम हामी गायकगायिकाले गर्नुपर्छ ।
कमाइ राम्रै छ । म लोकगीत गाएरै बाँचेको छु, मेरो परिवार पालेको छु, काठमाडौंमा आफ्नो स्टाण्डर्ड मेन्टेन गरेको छु । त्यतिमात्र होइन धेरै स्रोताहरुको नजरमा विरही कार्की भन्ने नाम स्थापित गराउन सफल भएको छु । त्योभन्दा ठूलो कमाई मैले खोज्नुपर्ने अरु केही पनि देख्दिनँ ।
पछिल्लो समय अरु मौलिकता हरायो भन्दै गर्दा तपाई चाहि मौलिकतातर्फ देखिनुभएको छ नि ?
नेपाली लोक गीत संगीत भनेकै मौलिक र वास्तविक गीत हुन् । त्यसैले म वास्कवितालाई बढी केन्द्रित गर्छु र गीत गाउँछु । तिनै गीत बढी चर्चामा आउँछन् जसले मेरो गायकीलाई पहिचान दिलाउन सफल भएका छन् । हो पछिल्लो समय लोकदोहोरी उद्योगलाई आरोप लागिरहेको छ तर हामीले आफ्नो माटो सुहाउँदो सिर्जना निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । मेरो गुराँस फुल्ने ठाउँतिर, जूनकिरी, डाँडैमा विजुली आयो, झ्याउँकिरी, मनकामना केबुलकार झिने चुरा लगायतका दर्जनौं गीत सबै मौलिकतामा नै छन् । मेरो आमा १, २, ३ पनि लोकगीतको क्षेत्रमा मलाई स्थापित गराउने गीत हुन् । लोकअनुसारको लोकगीत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु ।
तपाईंको प्रतिस्पर्धी को हो ?
मेरो प्रतिस्पर्धी म आफैं हो । म आफूले गरेको सिर्जनाभित्र नै म प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु । कसरी सिर्जना राम्रो हुन्छ भन्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रीत हुन्छ । एकपछि अर्को राम्रो बन्यो कि बनेर भन्नेमा मेरो प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ ।
अहिले त आधुनिक, चलचित्रको गीततिर पनि लाग्नुभएछ, कत्तिको सजिलो रहेछ ?
म संगीतको विद्यार्थी हुँ, क्रियशन गर्दै जाँदा हुने रहेछ । मैले पहिलोपटक आधुनिक गीत गरे, सबैले मन पराइदिनु भएको छ । चलचित्र रुमालै छ चिनोमा पनि संगीत गर्ने मौका मिल्यो । एउटा सर्जकलाई कुनै पनि सिर्जना गर्न गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ । हुन त लोकदोहोरी गीत गाउनेहरुसँग संगीतको ज्ञान हुँदैन भन्ने सोचले त्यसो भन्नुभएको होला । एउटा गायक गायिकामा संगीतको पूर्ण ज्ञान भएन भने त्यो अधुरो हुन्छ ।
त्यो सबै कलाकारमा लागू नहोला । कुनै एक दुई जनाले गरेका होलान् तर सबै कलाकारले नयाँ भनेर हेप्ने कुरै हुँदैन । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले धेरै कलाकारलाई स्थापित गराइदिएको छु । मेरो शब्द र लयमा नयाँ गायक गायिकाको धेरै गीत सफल भएका छन्, जुन गीतले अवार्ड चुम्नसमेत पछि परेका छैनन् । यसै वर्ष पनि मैले पाँच जना नयाँ कलाकारलाई अवसर दिएको छु । गत वर्ष पनि चार जना नयाँ कलाकारले मेरो शब्द र भाकामा गीत गाउनुभएको थियो । अब अरुले के गरेको छन् भन्नेतिर म लाग्दिनँ, नयाँ कलाकार जन्माउनु वा गारेटो देखाउनु पुरानोको दायित्व हो ।